Cerebral Function Monitoring (CFM) waa carruurta hadda dhalatay ee sida jootada ah ay ugu xiran tahay aaladda EEG.
Wuxuu kaga duwan yahay EEG-ga caadiga ah kan waxa la isticmaalaa afar fiilo oo keliya (elektroder). Shaashada kombiyuutarka waxa lagu arkaa aEEG, waxa loo beddeley amplitudintegrerat EEG kaas oo ka fudud, waa nooc si fudud loo turjumankaro marka loo eego EEG. Noocan aGG waxa turjumankara qof bartay cudurada dhicisyada iyo jirooyinka waxaanu isticmaalikaraa marka laga shakiyo inuu ilmuhu cudurka qalal leeyahay. CFM waxay u baahan tahay in lagu dhammaystiro EEG